फाईलहरू बल्क AutoCAD / Microstation - Geofumadas मा रूपान्तरण गर्नुहोस्
यो ठूलो मात्रामा फाईलहरू ठूलो मात्रामा परिवर्तन गर्न आवश्यकतामा फेला पर्दछ।
हामी AutoCAD २०११ १२ ढाँचामा 45 20112 dwg फाईलहरू पाउँछौं। हामीलाई थाहा छ कि यी फाइलहरू AutoCAD २०१० र २०११ मा पढ्न सकिन्छ तर यदि ती कम्प्युटरमा हेर्दै जाने छन् भने AutoCAD २०० has मात्र भएमा हामीले त्यसलाई रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ।
हामी v170 ढाँचामा 8 DGN फाइलहरू खर्च र DWG ढाँचा तिनीहरूलाई पारित यस प्रकारको समर्थन छैन भनेर जीआईएस कार्यक्रम को प्रयोगकर्ता द्वारा प्रशोधन गर्न आवश्यक छ।
हामी एकल फाइलको सन्दर्भमा छैनौं, जुन सामान्यतया साथ गरिन्छ खोल्नुहोस् / बचत गर्नुहोस्। दुबै केसका लागि समाधान आवश्यक छ र दुबै AutoDesk र ​​Bentley सँगै छ, यद्यपि बिभिन्न सर्तहरू अन्तर्गत:
यो कार्यक्षमता Microstation को कुनै संस्करण मा आउछ, यो शीर्ष मेनू बाट निष्पादित गरिएको छ:
उपयोगिता / ब्याच कनवर्टर
तपाईंलाई रूपान्तरित फाइलहरूको लागि गन्तव्य मार्ग छनौट गर्न अनुमति दिँदछ। चौथो आइकन फाईलहरू रूपान्तरण गर्नका लागि थप्न प्रयोग गरिन्छ, यो चाखलाग्दो छ कि यो मात्र dgn फाइलहरू रूपान्तरण गर्न मात्र सकिन्छ, समर्थित ढाँचाहरू: dgn v7, dgn v8, dwg, dxf, IGES (.igs), STEP ( .stp), .cgm, .x_t, .sat, .stl र रूपान्तरण यी कुनै पनि ढाँचामा हुन सक्छ।
कार्य पछि पुन: चालु गर्नका लागि बचत गर्न सकिन्छ। एकदम व्यावहारिक, केहि प्रक्रियाहरु को मामला मा कब्जा को मामला मा, यो प्रोग्राम गर्नु पर्छ ताकि प्रत्येक नक्शा मा गरीएको रखरखाव एक वेब प्रकाशन निर्देशिका मा निर्यात गरीन्छ जुन एक विशेष विस्तार मा फाईलहरू कब्जा गर्दछ। अवश्य पनि, यदि तपाईंसँग माइक्रोस्टेसन छैन भने, यो प्रक्रिया एक परीक्षण संस्करणको साथ चलाउन सकिन्छ जसले तपाईंलाई १ 15 मिनेट काम गर्दछ, यस प्रकारको प्रक्रिया पूरा गर्न पर्याप्त समय।
ओटोडिस्कको अवस्थामा, यसले नि: शुल्क उपकरण प्रदान गरेको छ सही दृश्य। यस अवस्थामा म AutoCAD २०१२ को साथ जारी गरिएको संस्करण प्रयोग गर्दैछु, यसलाई स्थापना गर्दा, AutoDesk २०१२ को कुनै पनि संस्करणको लागि यसले .NET को अपडेटको लागि सोध्छ। फ्रेम कार्य 4.
कार्यात्मकताहरू धेरै पक्षमा समान छन् कि बचतको सर्तमा ब्याक कन्वर्टरको ब्याक कन्वर्टर नौकरी सूची, सन्दर्भ फाइलहरूको व्यवस्थापन र ठगिएको छ अनावश्यक डाटा को। यो रूपान्तरण केवल DWG फाईलहरूको स्तरमा मात्र हो, यसले different वटा भिन्न ढाँचाहरूको रूपान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ जुन यस लाइनले संस्करण 5:: R97, २००, २०० 14, २०० and र २०१० बाट आएको छ।
दुबै समाधानहरूले ब्रान्डको आफ्नै प्रयोगकर्ताहरूको लागि सुरूवात समाधान गर्दछ। यद्यपि त्यहाँ महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरू छन्:
बेंटलेको मामलामा यससँग फाईलहरू बिभिन्न ढाँचामा रूपान्तरण गर्न सक्षम हुनुको फाइदा छ, व्यापक रूपमा प्रयोग हुने dwg, dgn र dxf सहित। अवश्य पनि, तपाइँले यसलाई रूपान्तरण गर्नुभयो जेनेरिकमा आधारित देखिन्छ जुन AutoCAD को कुनै पनि संस्करणले पढ्न सकिन्छ, २०० र साथै GIS प्रोग्रामहरू जुन त्यो संस्करणलाई मान्यता दिन्छ।
त्यहाँ एक बेफाइदा छ, त्यो कि dwg फाईल संस्करण २०१० लाई संचालन गर्न सक्षम हुन यो माइक्रोस्टेशन V2010i को साथ हुनुपर्दछ, अघिल्लो संस्करणले केवल dwg २०० for सम्मका ढाँचाहरू पहिचान गर्दछ। अन्य नोक्सान यो हो कि यस तालिकामा माइक्रोस्टेशनको संस्करण स्थापना हुनु आवश्यक छ, यद्यपि यो विकल्पको साथ परीक्षण हुन सक्छ। 8 मिनेट।
ओटोडिस्कको मामला, फरक dwg ढाँचामा रूपान्तरण गर्न सक्षम हुनुको फाइदा छ र यो एक नि: शुल्क उपकरण हो।
हानि जुन यो अन्य ढाँचामा गर्न सकिदैन, dxf मा पनि होईन। साथै, यो विकल्प AutoCAD मा समावेश छैन, त्यसैले एक अनुप्रयोग भित्र प्रोग्रामिंग दिनचर्या अधिक जटिल छ, जो माइक्रोस्टेशनको साथ सजिलो छ।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो किन महिलालाई निदाउन यत्ति गाह्रो छ?
अर्को पोस्ट कोड वा फोल्डरहरू तुलना गर्न उपकरणअर्को »
Rep जवाफ "रूपान्तरण AutoCAD / माइक्रोस्टेशन बल्क फाइलहरू"
अक्टोबर, 2020 बजे
शुभ अपरान्ह, मलाई तत्काल एउटा ठूलो समस्याको जवाफ चाहिन्छ जुन मलाई आज भएको थियो, म जान्न चाहान्छु यदि म * IGS फाईलहरू सामूहिक रूपान्तरण गर्न सक्दछु वा DWG / DXF फाईलहरू वा SKP फाईलहरू Sketchup बाट सिधा परिवर्तन गर्न सक्दछु। मैले करीव १ convert,००० रूपान्तरण गर्नु पर्छ (हो, सोह्र हजार) मलाई वास्तवमै उत्तर चाहिन्छ।
निस्सन्देह, जब तपाइँ सन्दर्भ थप गर्नुहुन्छ यसले तपाईंलाई त्यो विकल्प दिन्छ।
मेरो प्रश्न छ, सन्दर्भको सापेक्ष स्थान राख्नको लागि मैले कुन विकल्प राख्नु पर्छ?
अपडेट: AutoCAD 2012 ले dwg कनेक्ट नामक एक नयाँ प्रकार्य ल्याउँछ, जसले तपाईंलाई बल्कमा फाईल रूपान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ।